Fikarohana momba ny firaisana Tantara fanalefahana ny zaza amin'ny Ibleto di Challant | Giuseppie Costa: Seho endri-tarehy mitovy amin'ny Inarnie roa - Fikarohana Reincarnation
Fomba fiaina: Fahatsiarovana ny fiainana teo aloha tamin'ny fahazazany ary Tarika amin'ny alàlan'ny Fanahy
Mpanadihady: Giuseppie Costa
From: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, by Ian Stevenson, MD ary Avy any ambonin'ity fiainana ity, nosoratan'i Giuseppie Costa
Avy any ambonin'ity fiainana ity
Ao amin'ny bokiny, Giuseppe dia tsy nanome ny daty nahaterahany, saingy nanombantombana i Stevenson fa teraka tamin'ny taona 1880 izy dia teraka. Giuseppe dia lehibe tao amin'ny tanàna kely iray any Italia antsoina hoe Gonzaga, akaikin'ny Mantua. Nampiofana sy niasa ho injeniera izy.
Fahatsiarovana fahatsiarovan-tena momba an'i Constantinople sy fanentanana miaramila
Ny tantaran'i Giuseppe Costa dia nanomboka tamin'ny fahazazany, rehefa niteraka sary an-tsaina ny fiainany taloha ny sary hosodoko iray tao an-tranony. Ny sary hosodoko dia ny tanànan'i Constantinople, izay antsoina ankehitriny hoe Istanbul, any Turkey, izay eo amin'ny farany havanana. Ny sary hosodoko dia manasongadina ny renirano mandeha amin'ny tanàna, izay antsoina hoe Bosporus. Ian Stevenson dia namintina ny fahatsiarovana an'i Giuseppe, nanaitra ny hosodoko, toy izao manaraka izao:
"Toerana maro an'isa mitam-piadiana, sambo mandeha, manao sora-baventy, feon'ny ady, tendrombohitra, ranomasina miakatra hatrany amin'ny faravodilanitra, havoana rakotry ny voninkazo." (1)
Nofinofy nitsangatsangana tany Venice sy ady tany amin'ny tany mafana
Rehefa feno 10, ny rainy dia nitondra an'i Giuseppe tany Venice, izay nahitany nofinofy mazava. Ny famaritana ny nofin'i Giuseppe dia omena eto ambany:
“Rehefa avy nandeha lavitra tao anaty sambo, namakivaky renirano sy lakandrano izahay, tonga tany Venice. Nandeha barika feno miaramila nitam-piadiana tamin'ny fitafiana tamin'ny Moyen Âge izahay. Toa manodidina ny 30 aho ary efa nahazo baiko.
Taorian'ny nijanonanay tany Venice, dia niditra tamin'ny galera izay natoronay ny sora-baventy roa ny: manga iray misy ny sarin'i Virgin Mary eo amin'ireo kintana volamena, ary an'i Savoy, mena miaraka amin'ny hazo fijaliana fotsy.
Tamin'ny galley lehibe kokoa, izay voaravaka sy voaravaka, dia misy olona iray manaja ny rehetra ary niresaka tamiko tamim-pitiavana. Avy eo, tonga ny ranomasina, toa tsy manam-petra, miitatra mihoatra ny faravodilanitra. Avy eo dia nandeha tany an-tany izahay, ary nisy mazava manga manga kobalt.
Avy eo dia nifindra indray ny tafika ary niverina tany amin'ny toerana hafa. Teo no nilefitra ny miaramila; misy tranobe feno miaramila, ao ambanin'ny tanàna iray misy tilikambo taloha izay feno kofehy.
Avy eo tonga ny fanafihan-tsika, ady herisetra mahatsiravina nifarana fony isika nivadika tao an-tanàna. Avy eo dia tonga tao an-tanàna ilay diabem-pandresena mahafinaritra niaraka tamin'ny volam-bolany tao amin'ilay lemaka mahafinaritra. Io no tanàna mahafinaritra, Constantinople, naseho tamin'ny sary hosodoko tao an-tranonay tao Gonzaga, araka ny nianarako taty aoriana. ”(2)
Fantatr'i Giuseppe fa ny sarin'ity nofinofy mazava ity dia namolavola sary izay nananany fony izy nibanjina ny sary hosodin'i Constantinople tao an-tranon'ny ray aman-dreniny, taona maro talohan'izay. Giuseppe dia nanamarika fa niparitaka ny fahatsiarovana azy taloha, fa ny nofy tao Venice dia nametraka ny sary araka ny tokony ho izy.
Ny fahalianan'i Giuseppe tany am-piandohana sy ny raharaha mahamenatra tany am-piangonana tamin'ny androm-piainany taloha
Tamin'ny naha zatovolahy azy, i Giuseppe dia naneho fahaliana tamim-pahavitrihana tamin'ny tifitra, fencing ary ny mpitaingin-tsoavaly. Nirotsaka an-tsitrapo tamin'ny fanaovana miaramila izy ary voatendry ho lefitra faharoa tao amin'ny Royal Cavalry of Piedmont. Tiany ny fiainana miaramila. Tonga taminy mihitsy io, toy ny hoe niaina ny ainan'ny miaramila taloha. Napetraka tao amin'ny tanànan'ny Vercelli, izay eo anelanelan'i Milan sy Turin.
Tany Vercelli, nanana traikefa ara-pihetseham-po tsy mahazatra i Giuseppe Fiangonan'i San Andrea, izay sary an-kavanana. Nandeha teny akaikin'ny fiangonana izy ary nalain'ny mozika nipoitra avy ao. Tao anaty fiangonana dia nahatsapa fibebahana lehibe izy, izay tsy dia mahafinaritra loatra. Tsy hainy ny antony nahatonga azy hanana an'io fihetsika io, saingy nanombatombana izany fahatsapana fahamenarana izany mety misy ifandraisany amin'ny lanonana iray izay nandraisany anjara, angamba tamin'ny fahatongavana ho nofo teo aloha.
Giuseppe Manana zavatra tsy iainana amin'ny vatana
Taorian'ny fotoana nijanonany tao amin'ny tafika dia niverina nody i Giuseppe ary nifantoka tamin'ny fikarakarana sy fanohanan'ny fianakaviany. Ny fahalianany nandritra ny androm-piainany taloha izay nahavoarohirohy ny fanentanana miaramila izay nanomboka tany Venice ary nifarana tao Constantinople dia nanjavona.
Tsy nampoizina, nanana traikefa ivelan'ny vatana i Giuseppe, izay nanjary nino ny finoanoam-poana. Nianatra nandritra ny fanadinana teknôlôjia izy ary nijanona alina be. Reraka izy, nandry teo am-pandriany ary nandritra ny alina, dia nandondona jiro menaka, izay nameno ny efitrano.
Namoha azy ireo fofona ary nahita azy nitsinkafona tamin'ny vatany. Taitra izy raha nahita ny rindrina niditra tao an-efitran-dreniny, izay nahitan'i Giuseppe ny reniny nanokatra varavarankely mba hialana ireo menaka solika izay niditra tao amin'ny efitranony koa. Tsy nahita azy nihazakazaka niditra tao amin'ny efitranony izy ary nanokatra ny varavarankely tao amin'ny efitranony.
Nanontany ny reniny i Giuseppe raha nanokatra ny varavarankely tao amin'ny efitranony izy talohan'ny nidirany tao amin'ny efitranony. Nanamafy ny reniny fa nataony, izay ho an'i Giuseppe dia nanamafy fa ny fahaizany mahita amin'ny rindrina manasaraka ny efitranony. Ity tranga ity koa dia manohana ny laharam-pahamehana fa ny fahatsiarovantsika dia afaka mitazona fahatsiarovan-tena ivelan'ny vatana; ary fanahy marina tokoa isika.
Fanahy iray miseho mba hanome toky ny fiainany taloha Giuseppe
Ny toko manaraka ao amin'ny tantaram-piainan'i Giuseppe manaraka dia natao tamin'ny dia iray fialan-tsasatra izay nalainy niaraka tamin'ny namany roa. Izy ireo dia nandeha nijery ny lapa telo tao amin'ny lohasaha Aostas, any Italia, akaikin'ny sisin-tanin'i Frantsa. Giuseppe dia nanamarika fa manana fihetseham-po telo samy hafa izy amin'ireo castles ireo. Nitsidika ireo lapa telo ary ny fihetseham-po mifandraika amin'izany dia:
Castle amin'ny Fenis: Tsy dia nisy fihetseham-po i Giuseppe.
Castle amin'ny Ussel: Nahatsiaro alahelo sy fampahoriana i Giuseppe.
Castle ao Verres: Eto amin'ity toerana ity, naseho etsy ambony sy havanana, tena nampihetsi-po lalina an'i Giuseppe. Ny fahatsapana lehibe indrindra niainany dia fitiavana lehibe sy nenina lehibe.
Taorian'ny niverenany sy ny namany tany amin'ny toerana nijanonany, dia nanapa-kevitra i Giuseppe hiverina any amin'ny lapan'i Verres amin'ny filentehan'ny masoandro. Nisy oram-baratra nidina teo ambony lapa, ka nanery azy hijanona tao mandritra ny alina.
Nandritra ny alina teo amin'ny lapa tao Verres, dia nifoha i Giuseppe ary nahita jiro phosphoreur, izay nihalehibe sy niova ho vehivavy. Nitsangana avy tao amin'ny toeram-pitsaharany i Giuseppe ary nandeha tamin'ny fahitana ilay vehivavy. Rehefa nanatona azy izy, dia nahatsapa fitiavana lalina sy lalina i Giuseppe. Hoy ilay vehivavy avy eo:
"Ibleto! Te-hahita anao indray aho, alohan'ny hahafatesan'ny fomban'olombelona mampiray antsika indray… Vakio eo akaikin'ny tilikambon'i Albenga ny tantaran'ny iray tamin'ireo fiainanao taloha… Tsarovy aho ary miandry anao aho mandra-pahatongan'ny fotoana. ”(3)
Fanamarinana momba ny androm-piainan'i Giuseppe lasa teo amin'ny Lapan'i Albenga
Ity zava-niseho tamin'ny fisehon-javatra ity dia nahatonga ny fikarohana an'i Giuseppe mety ho ela velona. Nanana ny traikefa niaraka tamin'ny fanahy iray tao amin'ny lapa tao Verres izy dia nanadihady ny tantarany. Nianatra izy fa nisy lehilahy iray antsoina hoe Ibleto di Challant nanorina ny lapa tao 1380 ary i Ibleto dia mpanolotsaina azo itokisana amin'i Amadeus VI, Count of Savoy.
Avy eo izy dia nanapa-kevitra ny hanaraka ny torohevitry ny toe-tsaina ary nitsidika an'i Albenga i Giuseppe, naseho teo ankavanana, nahita ilay tilikambo, izay nilazan'ilay vehivavy ny filazalazana ny iray amin'ireo fotoana niainany taloha. Hitan'i Giuseppe fa misy tilikambo maro be akaikin'i Albenga. Ny iray tamin'izy ireo kosa dia avy amin'ny fianakavian'ny fianakavian'i Challant, ilay fianakaviana izay nanana ny lapa tao Verres, izay nahitany fa nisy ny fanahy.
Giuseppe mahita ny tantarany teo aloha
Nihaona tamin'ny tompon'ilay tilikambo i Giuseppe, ilay Marquis Del Carretto di Balestrina, izay nitahiry ny tantaram-piraisan'i Ibleto di Challant, ilay lehilahy izay nanana ny lapa Verres. Ny tantaram-piainana dia boky tsy navoaka nosoratan'i Boniface II, tompon'ny lapa Fenis, ilay toerana tsy ahitana fihetseham-po i Giuseppe.
Hitan'i Giuseppe fa tamin'ny famakiana ny tantaram-piainan'i Ibleto dia nahita fa ny fisehoan-javatra teo amin'ny fiainan'i Ibleto dia mifanandrify amin'ny sary hitan'i Giuseppe tamin'ny fahatsiarovana ny fahazazany nandritra ny fahavelony, tao anatin'ireo sehatra izay nandrisika azy tamin'ny fijerena ny sary hosodoko nataon'i Constantinople sy ny nofinofiny izay niseho tamin'ny Venice tamin'izy folo taona.
Ibleto di Challant sy ny Count of Savoy
Teraka tamin'ny 1330 i Ibleto. Hatramin'ny fahazazany dia voarohirohy tao amin'ny lapan'i Amadeus VI, ny Count of Savoy. Ny akanjo sandry Savoy dia omena amin'ny havanana. Taty aoriana dia lasa mpiara-miasa sy mpanolo-tsaina an'i Amadeus i Ibleto taty aoriana. Farany, Ibleto no nandova ny lapa tao Verres, ary koa ny fananana hafa, toa ny lapa tao Montjovet. Ireo fianakaviana hafa dia nandova ny tany hafa, toa ny lapa ao Ussel.
Tafintohina amin'ny Fitiavana i Ibleto
I Ibleto dia raiki-pitia tamin'ny rahavavin'i Amadeus VI, izay nantsoina hoe Blanche of Savoy. Te hanambady azy i Amadeus, saingy nanamboatra mariazy ho an'ny rahavaviny tamin'ny Tompon'i Milan i Amadeus. Tamin'ny farany, nanambady an'i Giacometta di Chatillon, i Ibelto, izay sendikà nalamin'ny rainy. Giuseppe sy Giacometta dia nivady tamin'ny Septambra 28, 1350. Giacometta dia tokony ho efa maty talohan'i Giuseppe, satria asehon'ny firaketana fa nanambady indray izy taty aoriana.
Reincarnation & the Crusades: Ny fisamborana an'i Gallopoli sy Constantinople
Ao amin'ny 1366, i Ibleto dia niaraka tamin'i Amadeus VI niaraka tamin'ny sambo iray niadiana tamin'ny Turks tao Constantinople. Ny Crusades dia andiam-panentanana nataon'ny miaramila Kristiana eropeana izay nitady hanafaka an'i Jerosalema amin'ny tafika Islamika.
Nikarakara ny tafiny tamin'ny voalohany tany Venice i Amadeus. Avy eo izy ireo dia nandeha tany Morea any Gresy atsimo mba hanangana indray. Avy tao dia nifindra nankany Gallipoli ny heriny ary notazonin'ireo Tiorka Islamika. Ny tafik'i Amadeus dia nandresy tamin'ny ady ary ny Turks dia nanolotra an'i Gallipoli. Avy tao i Amadeus sy ny tafiny dia nandeha nankany Constantinople, ary tsy nahatohitra azy ireo. Avy any i Amadeus sy ny tafiny niverina avy tany Italia.
Ny fikomiana any Biella, ny fisamborana ny evekan'i Vericelli sy ny fanilihana an'i Ibelto
Tao 1378, Ibleto dia nandray anjara tamin'ny hetsika miaramila indray. Ireo firaketana ara-tantara dia nanambara fa nametraka fikomiana tao amin'ny tanànan'i Biella, izay akaikin'ny Turin. Amadeus dia nisambotra ny solontenan'i Vatican, ny evekan'i Vercelli, izay hita fa tafiditra tao amin'ilay fikomiana. Ibleto dia nogadrain'ny eveka tao amin'ny lapa tao Montjovet. Ny Papa, tamin'ny famaliana azy, dia nanala an'i Ibleto ny fitazonana ny eveka tao Montjovet.
Reincarnation & the Vatican: Ibleto dia afa-baraka tao amin'ny fiangonana tao St. Andrea, izay nahatsapan'i Giuseppe fibebahana
Taty aoriana dia natolotry ny Vatican hampiakatra ny sazy fanodinana raha toa ka nanambara ampahibemaso ny evekan'i Vercelli i Ibleto tamin'ny lanonana iray hotontosaina ao amin'ny fiangonan'i St. Andrea. Nanaiky i Ibelto fa niaritra ilay fampijaliana vahoaka.
Tsarovy fa niaina fahatsapana fibebahana lehibe i Giuseppe rehefa nitsidika ny fiangonana tao St. Andrea izy, rehefa napetraka tao Vercelli nandritra ny asany tao amin'ny tafika.
Ny alahelon'i Guiseppe tao amin'ny Castle tao Ussel & ny henatr'i Ibleto
I Giuseppe koa dia nahalala fa ireo fianakavian'i Ibleto, izay nitana ny lapa tany Ussel, naseho teo ankavanana, dia nitondra henatra lehibe taminy rehefa nanomboka nandroba ireo olona nipetraka tao amin'ny lemaka ambanin'ny lapa. Ny Count of Savoy dia nanasazy an'ireo fianakaviana ireo tamin'ny fandoavana onitra, saingy simba ny anaran'ny fianakaviana. Fantatr'i Giuseppe ny antony nahatonga azy hanana alahelo sy fampahoriana rehefa nitsidika ilay lapa tao Ussel izy.
Giuseppe Costa dia sarin'i Ibleto di Challant, izay navoakany tao amin'ny bokiny. Ernesto Bozzano, mpikaroka izay nanadihady ity raharaha ity dia nanamarika fa nitovitovy ny endrik'i Ibelto sy Giuseppe ka nisy diso ny iray taminy. Samy natanjaka be mantsy izy roa lahy ary samy nanana ny tafika.
Fanomezana torolàlana ho an'ny fiainana taloha
Giuseppe Costa dia nahavita nanolotra fahatsiarovana ny fiainany taloha tamin'ny alàlan'ny tantaram-piainany izay hitany tao amin'ny fananana ny Marquis Del Carretto di Balestrina, tompon'ny tilikambo ao Albenga.
Angamba ny lafiny manintona indrindra amin'ity raharaha ity dia ny fomba nahitan'i Giuseppe ny fitantarana azy. Tsarovy fa nandany ny alina tao amin'ny lapa tao Verres izy rehefa nisy fanahy na fanahy iray izay nandray azy tamim-pitiavana lehibe ary nilaza taminy fa hahita fampahalalana momba ny fiainany taloha tao amin'ny tilikambo tao Albenga, izay ao amin'ny Riviera frantsay.
Tahaka izany, io toe-tsaina io izay niseho tao amin'ny lapa iray tany Italia akaikin'ny sisin-tanin'i frantsay dia nanoro hevitra an'i Giuseppe handeha amin'ny tilikambo eo amin'ny Riviera frantsay sahabo ho 140 kilaometatra na 225 kilometatra.
Araka ny nomarihin'i Giuseppe sy i Ian Stevenson, MD, inona no mety hahitana ny fitantaran'ny biografia ao Albenga, 140 kilaometatra / 225 / kilometatra miala, tsy kisendrasendra?
Ankoatr'izay, nanondro i Giuseppe fa eo anelanelan'ny 1300, tamin'ny nanoratana sy ny 1900, raha nahita ny fitantaran'ny biolojia tao Albenga izy dia mety nidina teo am-pelatanan'ny iray amin'ireo havany ny biolojia. Inona ny voka-dratsy hitranga eo amin'ny toerana iray izay nilazan'ny fisehoana azy fa hahita vaovao momba ny fiainany taloha izy?
Io tranga io dia mampiseho mazava fa misy fanahy iray manamora ny fanadihadiana momba ny fiainany taloha.
Iza ilay fanahy vehivavy niseho tamin'i Giuseppe tao amin'ny lapa Verres? Ny kandida telo voalohany an'i Giuseppe dia i Blanche of Savoy, izay tian'i Ibleto, saingy tsy navela hanambady; Giacometta di Chatillon, izay lasa vadiny voalohany; ary farany, ny vadiny faharoa, izay tsy voatondro ao amin'io fitantarana io.
Hamarinin'ny nofinofy taloha
Andao hodinihintsika ny lafiny amin'ny nofin'i Giuseppe izay niainany tany Venice tamin'ny faha-10 taonany, ary ireo tranga niseho tamin'ny fiainan'i Ibelto di Challant, araka ny nambaran'ny biodika sy firaketana hafa:
1. Nofy: “Taorian'ny dia lavitra dia tao anaty sambo, namakivaky renirano sy lakandrano, tonga tany Venice izahay. Nandehandeha tao amin'ny trano fivarotana barika feno miaramila mitam-piadiana mitafy fitafian'ny Moyen Orient izahay. Toa 30 taona teo ho eo aho ary nanana karazana baiko. ”
Biography: Ao amin'ny 1366, i Ibleto dia niaraka tamin'i Amadeus VI tao anaty sambo iray niady tamin'ny Turks tao Constantinople. Amadeus tamin'ny voalohany nandamina ny tafiny tao Venice.
2. Nofy: "Taorian'ny nijanonany tao Venice, dia niditra tamin'ny galera izay natorananay ny sora-baventy roa izahay: manga ny manga miaraka amin'ny sarin'ny Virjin'i Maria ao amin'ireo kintana volamena, ary an'i Savoy, mena miaraka amin'ny hazofijaliana fotsy.
Teo amin'ny galley lehibe kokoa, izay nolokoina sy voaravaka kokoa, dia nisy olona iray nanaja fatratra ny rehetra ary niresaka tamiko tamim-pitiavana. Avy eo, tonga ny ranomasina, toa tsy manam-petra, miitatra mihoatra ny faravodilanitra. Avy eo nirotsaka an-tanety tao amin'ny tany manja izany miaraka amin'ny lanitra manga misy kôbalta mazava. ”
Biography: Nikarakara ny tafiny tamin'ny voalohany tany Venice i Amadeus. izy ireo avy eo dia nankany Morea any Gresy atsimo mba hanangana indray. Morea no mety ho toerana hitan'i Giuseppe tamin'ny nofiny fa nidina ny tafika. Amin'ny nofiny dia ilay lehilahy nanaja sy izay nampiseho ny fananana fitiavana lehibe an'i Guiseppe dia ho Amadeus VI.
3. Nofy: “Avy eo dia nidina indray ny tafika ary nifindra tamin'ny toerana hafa. Teo no nilefitra ny miaramila; misy tranobe feno miaramila, ao ambanin'ny tanàna iray misy tilikambo taloha izay feno kofehy. Dia tonga ny anay fanafihana, ady herisetra mahatsiravina nifarana fony isika nivadika tao an-tanàna. "
Biography: Avy any Morea any Gresy atsimo, ny tafika Amadeus VI dia nandeha tany Gallipoli, izay notànan'ny Tiorka Islamika. Ny tafik'i Amadeus dia nandresy tamin'ny ady ary ny Turks dia nanolotra an'i Gallipoli. Raha izany no izy, ny mety ho fanafihana sy fakàna tanàna iray ao amin'ny nofin'i Giuseppe ny fisamborana an'i Gallipoli avy amin'ny Tiorka Nataon'i Amadeus, Ibelto sy ny miaramilany.
4. Nofinofy: “Avy eo tonga tao an-tanàna ny diaben'ny tafika manintona niaraka tamin'ny volamena teo amin'ny helodrano mahafinaritra. Ity no tanàna mahafinaritra, Constantinople, naseho tamin'ny sary hosodoko tao an-tranonay tao Gonzaga, araka ny nianarako taty aoriana. ”
Biography: Amadeus sy Ibelto dia niditra tao Constantinople. Ny tsy fitoviana iray dia ny firaketana ara-tantara, i Amadeus dia naka an'i Constantinople tsy nanohitra. Raha izany dia hita fa tao amin'ny nofin'i Giuseppe dia nisavoritaka ny fisamborana an'i Constantinople tamin'ny fanafihana an'i Gallipoli.
Fitoviana ara-batana: Zava-dehibe, tsikaritra avy amin'ny sarin'i Ibleto fa tena mitovitovy ny fitovian'i Ibleto sy i Giuseppe ka tsy takatry ny saina. Tsy ny endri-javatra ihany no mitovy endrika, samy nanana trano lehibe sy fananganana miaramila izy ireo.
Fahatsiarovana jeografika: Aza adino koa fa ny toerana niainana taloha, anisan'izany i Venice, ireo castles an'i Verres sy Ussel, ary ny fiangonana any St. Andrea, dia nanentana ireo fahatsiarovana na fihetseham-po tao Giuseppe. Hitantsika ihany koa io toe-java-misy eo amin'ny toerana ara-jeografika io izay mandrisika ny fahatsiarovana ny fiainana taloha sy ny fihetseham-po amin'ny tranga misy John B. Gordon Jeff Keene, Francesco Foscari | Wayne Peterson ary Louise Vanderbilt | Wayne Peterson.
Ny Fanahy Mitarika: Endrik-javatra mahavariana amin'ity tranga famerenana ity dia ny famahana azy amin'ny alàlan'ny fanampian'ny fanahy vehivavy izay niseho tamin'i Giuseppe tao amin'ny lapa tao Verres. Io toe-tsaina io dia nandray azy tamim-pitiavana lehibe ary nilaza taminy fa hahita fampahalalana momba ny fiainany taloha tao amin'ny tilikambo iray any Albenga, ao amin'ny Riviera frantsay. Noho izany toe-tsaina izany dia nanoro hevitra an'i Giuseppe handeha amin'ny tilikambo tokony ho 140 kilaometatra na 225 kilometatra miala ny tranoben'i Verres, izay nahitany ny biolojia ka nahafahan'izy ireo nanamarina ny fiainany taloha.
Mampahatsiahy ny tranga izany Carroll Beckwith | Robert Snow, rehefa nentina avy tany Indianapolis nankany New Orleans ny Kapiteny Snow, tao no nahitany ny hosodin'ilay vehivavy mpihaza izay hitany tamin'ny fivoriam-piainany taloha. Ny nahitana ny sary hosodoko an'ny alàlan'ny fihazana dia nahafahan'ny Kapiteny Snow nanamafy ny fahatsiarovana ny fiainany taloha.
Ny fahasamihafana iray dia nentin'ny kapiteny Snow tamin'ny sary hosodoko tsy nahy, tamin'ny alàlan'ny fifandraisan'ny telepathic hita avy amin'ny tontolon'ny fanahy. Ny mifanohitra amin'izany, toa i Guiseppi dia toa manana fahaiza-manao clairvoyant, satria izy dia nahita ny maha-vehivavy ilay vehivavy, izay nanampy azy hamaha ny raharaha nisy azy.
Fehiny: Fahatsiarovana ny fiainana taloha, fisehoana ara-batana & fanahy amin'ny tantara momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray
Raha jerena fa ity tranga ity dia misy ny fanamarinana ny fahatsiarovana ny fiainana taloha, ny fandinihana ny fitoviana ara-batana manomboka amin'ny androm-piainany mankany amin'ny toerana iray hafa ary ny toerana ara-jeografika manentana ny fahatsiarovana ny fiainana taloha, ny fihetseham-po ary na dia fanahy iray aza, dia mankasitraka an'i Giuseppe Costa noho ny famoahany ny tantarany ary tamin'i Ian Stevenson noho ny nitahiry azy tao amin'ny European Cases of the Reincarnation Type. Izany dia tena tranga manankarena sy mahafinaritra.
1. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 16
2. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 16
3. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 18